🥇 ▷ Elon Musk wuxuu galay suuqa casriga ah? Waxaa laga yaabaa inay haa tahay, oo leh barnaamijka cusub ee Tesla Quadra (sawir) ✅
Elon Musk wuxuu galay suuqa casriga ah? Waxaa laga yaabaa inay haa tahay, oo leh barnaamijka cusub ee Tesla Quadra (sawir)
Gudaha mare magnum Laba sawir oo cusub oo qarsoodi ah ayaa ka soo muuqday internetka, kuwaas oo muujinaya waxa ay noqon doonaan qaybaha jirka ee taleefanka casriga ah. Marka muxuu u hayaa jacayl badan oo loogu talagalay walxahaas caanka ah? Sababtoo ah dhabarka dambe waxaa ku yaal sumad si fiican u yaqaan baabuurta iyo farsamada xiiseeya, taas Tesla.
Kuwa aan magacan aqoon, waxaan ka hadlaynaa shirkadda Elon Musk, soo saare baabuurta iswada ee ugu caansan sanadihii la soo dhaafay. Summada illaa iyo hada waligeed looma adeegsan qaybta casriga ah, sidaa darteed mid ka mid ah sawirrada ayaa laga yaabaa inuu noqdo qalabkii ugu horreeyay ee sumadda shirkadda Molaad.
Marka sidan loo fiirsado, uma muuqato mid aad u liidata alaabada kale ee horey loo arkay bilihii la soo dhaafay. Dhinaca hore waxaa ku yaal a bandhig aad u ballaaran, oo leh qaybo dhuuban iyo feejignaan dusha sare. Dhabarku waa dabeecad badan, halkaasoo sumadda Tesla ay ku badan tahay sidoo kale waxaad arki kartaa godka loogu talagalay kamaradda gadaal, laga yaabee mid laba-cam.
Sida ay sheegayaan wararka xanta ah, aaladda ayaa loo yeeri lahaa Tesla Quadra, laakiin macluumaadku wali aad ayuu u yar yahay waqtigan. Marka lagu daro suurtagalnimada in kuwanu yihiin sawirro been abuur ah, oo aan si muuqata u muuqan, shaki gelintu waxay inta badan quseeyaan laba arrimood oo arrinta ah: dhinaca kale, waxay noqon kartaa qalab loogu talagalay shaqaalaha ama macaamiisha shirkadda ama shaqsiyaadka gaarka ah; dhinaca kale, waxay noqon kartaa mid iskaashi inta u dhaxaysa Tesla iyo soo saare taleefanka casriga ah ee horay loo yiqiin, sida kiiska moodooyinka Huawei ee sita astaanta Porsche Design.
AKHRISO: Qiimaha kor u kaca xaqiiqda
Haatan wax walba waa suurtogal, markaa yaannaan u xaddidin khayaaliga. Haddii Elon Musk uu runtii go’aansaday inuu galo suuqa taleefanka gacanta, oo uu si toos ah u muujinayo astaanta Tesla, waxaan hubnaa inay dareenka leaker waxay noqon doontaa mid aad u sareysa arintan waxaanan dhowaan awood u yeelan doonnaa inaan ogaano tilmaamo dheeri ah oo ku saabsan qalabkan.